लोभलालच देखाएर होईन मेरो काम मन परेर पार्टी प्रवेश गरेका हुन् : भिम प्रसाद ढुंगाना
मंगलबार, साउन २०, २०७७ ११:४७:१६ युनिकोड
नीलकण्ठ नगरपालिकाको समग्र विकास, भावी योजना , कोरोना बिरुद्ध नगरपालिकाले गरेको गतिबिधि तथा गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को समिक्षा लगाएतका बिषयमा जनतासँग मेयर रेडियो कार्यक्रममा पत्रकार रामकुमार थापाले नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भिम प्रसाद ढुङ्गानासँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
१.कोभिड– १९ को व्यवस्थापनमा नीलकण्ठ नगरपालिकाले गरेको व्यावस्थापना कै कारण संक्रमितको संख्या घटाउन सकियो हो ? कसरी बुझ्नुहुन्छ ?
दुई वटै कुरा हो । म भाग्यमानी नै भन्छु आफुले आफैलाई । किन भने नीलकण्ठ नगरपालिकामा कोरोना भाईरस पोजिटिभ ६१ जनालाई देखिएको थियो । ती ६१ जनामध्ये कसैको पनि मृत्यु भएको छैन । यो अर्थमा मैले आफुले आफैलाई भाग्यमानी भन्दछु । मैले पहिला पनि घोषणा गरेको थिए सम्पुर्ण खर्चहरु नीलकण्ठ नगरपालिकाले व्यर्होछ भनेर । आजका मिति सम्म मात्रै होईन जब सम्म देशमा कोभिड १९ निर्मुल भयो भनिदैन तब सम्म खर्च व्यर्होर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु ।
व्यवस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ भने आईसोलेशन र क्वारेन्टाईन राम्रो सँग संचालन गरेका थियौँ । हामीलाई प्रदेश र संघ बाट भिटिएम नआएपछि आफैले खर्च व्यहोरेर हामीले सम्पुर्ण व्यवस्था गरिहेका छौँ । त्यहाँ चाहिने आवश्यक काउन्सेलिङ देखि लिएर त्यहाँको व्यवस्थापन देखि लिएर हामीले राम्रो सँग व्यवस्थित गर्न सकेको कारणले गर्दा र आत्मवलको कारणले गर्दा कोभिड १९ का संक्रमणहरु घट्दै गएका छन् ।
२.कोभिड–१९ को महामारीको व्यवस्थापन गर्न सकियला जस्तो लागेको थियो । कसरी सोच्नु भएको थियो ?
अनुभव भनेको त्यही हो ।मलाई गर्व लाग्छ हामीले गत आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकमबाट कोभिड १९ को लागि २ करोड जति रकम खर्च भयो । कुनै पनि विकास निर्माणको बजेटहरुमा हामीले एक पैसा पनि खर्च गरेनौं । त्यही पैसा व्यवस्थापन गरेर राखिएको थिएन भने कोभिड आउछ भन्ने कसलाई थाहा थियो र ।
सम्भवत धेरै पालिकाहरुमा अहिले घाटामा बजेट गएको अवस्था छ ।तर हाम्रो एक रुपैैँया पनि बजेट घाटामा गएको अवस्था छैन । उल्टो कोभिड १९ को सम्पुर्ण खर्च व्यहोर्दा पनि दुई करोड ४९ रुपैैँया हामीले विकास निर्माणमा खर्च गरेका छौँ। त्यसकारण एउटा अनुभवको कारणले कसरी राख्नुपर्छ भन्ने मलाई ज्ञान थियो । केहि नगरसभाबाट पास गरेर बजेटहरु राखेका थियौँ त्यो कारणले गर्दा पनि तत्काल आवश्यक परेको बेलामा खर्च गर्न सकिएको छ ।
३.आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई फर्केर हेरियो भने हजुरले गरेको काम प्रति कत्तिको सन्टृष्टि हुनुहुन्छ ?
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ लाई हेर्ने हो भने मैले त्यत्ति धेरै सकारात्मक देखिन । यो अर्थमा कि मैले भौतिक पूर्वाधारको वर्ष भनेको थिए ।कोभिड १९ ले गर्दा भौतिक पूर्वाधारमा सोचेको जतिको काम गर्न सकिएन। कोभिड १९ पनि यो आर्थिक वर्षमा आएको कारणले धेरै सकारात्मक वर्ष हो यसमा धेरै काम गर्यौ भनेर मैले दावा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन। खानेपानीका ठुला–ठुला योजनाहरु हामीले सुरुवात गर्न सकिरहेकोे अवस्था छैन । हामीले खानेपानी र हरेक वडा कार्यालय सम्म सडक ग्रावेल गर्ने जुन सोच थियो त्यो पुरा गर्न सकिएन।
त्यत्ति मात्रै होईन अहिले कोभिड १९ नभएको भए हामीले जापानको ईसुहारा सिटि सँग जुन कुराको समन्वय गरेका थियौँ त्यसमा चार वटा कुराहरु उल्लेख गरेका थियौँ । भौतिक पूर्वाधारका कुरा, शिक्षा, कृषि लगाएतका कुराहरु हामी गरेका थियौं । हामीले जापानी संस्था नेपाल मार्फत् काम गर्ने भनेर छुट्याएका थियौं । विश्वभर कोभिड १९ को माहामारी फैलिएको कारणले गर्दा त्यो काम हामीले गर्न सकेनौं । सम्भवत अब कोभिड १९ को माहामारी विश्वमा नै न्युनिकरण हुदै जान्छ तब बाट हामीले काम सुरु गर्ने छौं ।
४.कोरोना भाईरस (कोभिड १९) को कारणले गर्दा रोकिएको कामहरु के अब आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा पूर्णता पाउछ ?
त्यो कामले पुर्णता नपाउने भन्ने कुरा त हुदैन । हतारमा कामहरु भईरहेका छन् । हामिले यसै कार्यक्रम मार्फत् भनेका थियौं जेठ भरिमा हामीले ग्रावेल मात्रै भए पनि रिङरोडमा बस चलाउछौं भनेका थियौं । कोरिडोरको काम उपभोक्ता समिति बनाएर अगाडी बढाएको छ अब भदौ बाट सुरु हुन्छ । गत सालको पनि बजेट छ २०७७/०७८ मा पनि राखेका छौं ।
अब निरन्तर रुपमा बसपार्क बाट काम सुरु हुन्छ । अन्तिममा आज सर्वदलिय समिति बन्यो । त्यसपछि खोला बढिहालेको कारणले हामीले सुरुवात् गर्न सकेको छैन । खानेपानीको कामहरु अगाडी बढ्छ । भ्यु टावरहरुको काममा २ नम्बर वडाको जुरेथुमको भ्यु टावर निर्माण भएको छ। ९ नम्बर वडाको भ्यु टावरमा अहिले कम भएको कारणले गर्दा समस्या भईरहेको छ । भ्यु टावर वरिपरि हामीले पोहोर १२ हजार चियाको विरुवा लगाएका छौँ । अहिले पनि ५० हजार बराबरको चियाको विरुवा किनेर ल्याएका छौँ त्यहाँको माटो टेष्ट गर्दा चियाको लागि उपयुक्त हावापानी भएको कारणले गर्दा कार्यपालिकाको सदस्य राजन बराईलीले पनि विरुवाहरु ल्याउनु भएको छ ।
अर्को नगरवासिहरुलाई खुशिको कुरा के सुनौं भने अब धादिङबेशीको पिचको सम्झौता भईसकेको छ । तपाईहरुले अब आउने तिहार सम्ममा धादिङबेशीको मुहार फेरिएको देख्नुहुन्छ । यो बर्खाको समयमा पिच गर्ने कुरा भएन । पानी रोकिपछि काम सुरु गर्नेछौं ।खानेपानीको लागि हामीले केहि गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । सम्भवत अब भदौं बाट सुरु गर्नेछौं । धादिङबेशीमा खानेपानी पाईपहरु बिचबीचमा बिग्रीएको कारणले गर्दा अहिले बजार क्षेत्रमा पानीको अभाव भएको देखिन्छ ।
कतिपय कर्मचारीहरुले धेरै थोरै मिलाएर छाडेको कारणले गर्दा पनि हो ।अब अहिले नीलकण्ठ नगरपालिकाले राजपत्र प्रकाशन गरि सकेको छ ।सम्भवत साउन महिना भित्रमा नयाँ तदर्थ समिति गठन हुन्छ त्यो तदर्थ समितिले ६ महिना भित्रमा अर्को निर्वाचन गर्छ र अहिले समिति विहिन छ धादिङबेशीे खानेपानीको। अहिले कुनै पनि आधिकारीक छैन ।आधिकारीक हुनको लागि नीलकण्ठ नगरपालिकामा आएर दर्ता गरेर फर्म भरे पछि मात्रै आधिकारीक हुन्छ। हामीले अहिले ऐन ल्यायौं त्यसपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरि सकेको छौं अब यो आर्थिक वर्षबाट सुरु हुन्छ ।
५.तपाईहरुको जुन नगर सभाको बैठक बस्यो पहिलो मिटिङमानै तिर्खा मुक्त नगर बनाउने तपाईको सपना छ अव के तपाईको कार्यकालमा पुरा गर्न सक्छौं त?
सपना पुरा गर्न भनेर लागिएको हो सपना देख्नको लागि मात्रै होईन । त्यो अनुसार दातृ निकायहरुले पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ । मलाई समस्या के छ भने नगरपालिकाको जनप्रतिनिधि भनेको नगरप्रमुख मात्रै होईन प्रदेश सांसद र संघिय सांसद पनि हुनुहुन्छ तर उहाँहरुले कहिल्यै पनि समन्वय गर्नुहुन्न ।
उहाँहरुको दिमागमा एउटा के छ भने म जनप्रतिनिधी हो त्यहाँको विकासको लागि साथ दिन पर्छ भन्दा पनि म नेकपाको पार्टीको लिडर हो नेकपाको कार्यकर्तालाई मात्रै अगाडी बढाउन्ुपर्छ र नीलकण्ठ नगरपालिका भनेको कांग्रेसको मेयर हो त्यसकारणले उसलाई सहयोग गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकताले गर्दा मलाई धेरै थोरै गाह्रो भएको हो ।
होईन भने नीलकण्ठ नगरपालिकामा ६ करोड रुपैैँया संघिय सांसदले बाढ्नुभयो ३ करोड प्रदेश सांसदले बाढ्नुभयो त्यो मिटिङमा समेत मलाई बोलाउनु भएन । नगरप्रमुखको नाता मात्रै होईन उहाँहरुलाई पैसा वितरण गर्न दिएको कार्यविधिमा पनि नगरप्रमुखलाई अनिर्वाय निर्देशक समिति भनिन्छ त्यसको सदस्य मै आफै पनि हो तर मलाई नबोलाई बाढ्नुभयो ।
त्यो कारणले केहि अप्ठ्यारो परेको छ त्यो चुनौतिलाई सहज रुपले सामना गर्ने हैसियत मैले राखेको छु । मैले आफुले घोषणा पत्रमा निकालेका कुराहरु मैले बोलेका कुराहरु त्यो सबै पुरा गर्छु त भन्दिन तर ७०/७५ प्रतिशत भन्दा बढि काम गरेर देखाउने छु ।
६.स्थानीय तह,प्रदेश र संघ बीच समन्वय भएन भने त समग्र नगरपालिकालाई नै हानि पुग्छ नि ?
रिङरोडको बहुबर्षिय योजना हो पहिलो वर्ष साढे तीन किलोमिटर पिच गरियो दोस्रो वर्ष त्यो बहुबर्षिय योजना किन आएन भनेर उहाँहरुले कहिल्यै पनि गएर भन्नु भएन ।उल्टो नीलकण्ठ नगरपालिकामा बहुबर्षिय योजना काटिने काम भएको छ ।
मैले यसै एफ एम बाट भनेको थिए ३२ करोड यो भन्दा अगाडीको सरकारले फोर्सेटार सम्म्को पिच टासेको थियो । आज त्यहाँको पिचको अवस्था कस्तो छ । सुनौला बजार जाने त्यत्ति राम्रो बाटो थियो आज संघिय सांसद र प्रदेश सांसद कुन नैतिकताले जनताको सामु जानुहुन्छ । २०/२५ करोड हाल्न सकिदैन थियो र ?अहिले के कारणले गर्नै नसकिएको हो त ।
तपाईहरुले दुई वर्षको अवधिमा के काम गरेर देखाउनु भएको छ ।जनताले चाहे अनुसारको योजना दिन जान्नु भएन । ती कार्यकर्तालाई चाहाना अनुसारको योजना दिनुभयो अहिले सल्यानटारमा ५० औं लाख फ्रिज भएर गएको छ ।कार्यमुखी बजेट नदिएपछि जनतामुखी बजेट नदिएपछि यस्ता योजनाहरु सकिहाल्छ नि । मैले धेरै पटक भनिसके सांसदहरुलाई विचार आफ्नो ठाउँमा छ तर विकास भनेको सबैको लागि हो।ट्याब्लिङ पिच भनेको सबै भन्दा पातलो पिच हो ।
त्यहाँ सबै लथालिङ भईसक्यो । आज ३२ करोड आएको बेलामा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेको भए आज फोस्रेटार सम्म जान धेरै सहज हुने थियो । एफ एममा आएर सांसदहरुले एती उती बजेट हाल्छु भनेको सुन्छु तर खै कति बजेट हाल्नु भयो ।तिप्लिङ सडक खण्ड ग्रावेल भएको छ तर गाडी चल्न सक्ने अवस्था छैन ।
अस्ति विपद व्यवस्थापनको मिटिङ बसेर मर्मत सुधार गर्ने भनेर निर्णय गर्यौ जति पैसा लाग्छ सांकोष तिप्लिङको बाटो मर्मत सुधार गर्ने भनेका थियौं हतारमा नेत्रावतीका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर हामी गर्छौ भन्नु भयो तपाईलाई ईच्छा लाग्छ भने गर्नुस् तपाईको पनि गाउँ जाने बाटो हो भनिदिए मैले पनि । नत्र भने हामीले निर्णय गरेर राम्रो गा्रवेल गर्ने भनेर पैसा छुट्याई सकेका थियौं । फेरि अहिले बाटो मर्मत गर्न उहाँ आउने कि नआउने त । एकदिनको ठाडो खोलाको भल जस्तो आएर हुन्छ ।
विनोद (निलकण्ठ ४ जएन्ती डाँडा)
७.सुनौलाबजार जाने बाटोमा घर अगाडी पिच गरेको बाटो खानी गाउँबाट आउने पानीले बाटो विचमै छिनेको छ,त्यो एक वर्ष भयो बाटो बनाको त्यो बनाउने जिम्मा कस्को हो ? नगरपालिका हो कि जुनले आयोजना गरेको हो उसैले बनाउनुपर्ने हो ?
उक्त सडक प्रदेश अन्र्तगत पर्दछ । यदि प्रदेशले हामीले गर्दैनौ भन्यो भने हामी अगाडी बढ्छौं । त्यसलाई तिप्लिङ सडकलाई, सल्यानटार जाने सडकलाई पनि हामीले हेर्ने छौं ।प्रदेश अन्र्तगतको सडक भएपनि नरपालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग प्रति मैले कन्जुसाई गर्ने छैन ।
कोरोनाको नतिजा के हुदैँछ धादिङमा, के तपाई र नगरवासिहरुले सोसियल दुरी कायम गर्नुभएको छ त ? पार्टी प्रवेशको कस्तो साईत र नौटंकि हो त्यहाँ सामाजिक दुरी कायम त देखिएन नि ?
कोरोना भाईरसको कुरा गर्दा धादिङमा एक जनाको पनि मृत्यु भएको छैन । घोषणा गर्ने देखि लिएर वोर्डर देखि ल्याउने, आईसोलेशनमा ,हामीले नगरपालिकामा मात्रै होईन अन्यत्र गाउँपालिकाको पनि ल्याएर राखेका छौं । हाम्रो व्यवस्थापन पनि राम्रो भएर पनि होला कोरोना भाईरस न्युनिकरण गर्नमा सहज भएको छ अहिले सम्म ।
दोस्रो कुरा पार्टी प्रवेशका कुराहरुमा मेन त विश्वास हुनुपर्छ । जहिले पनि मैले अनुरोध गरिरहेको हुन्छु यदि म बाट त्यस्ता केहि गल्ती कमजोरी भए सल्लाह सुझाव दिनुस् म सच्याउने छु । म थोरै बोल्छु धेरै काम गर्छु । मेरो पहिलो कुरा विकास निर्माण र जिम्मेवारीलाई पुरा गर्न म लागि परिरहेको छु ।
म कांग्रेसको पनि लिडर भएको हुनाले कांग्रेस पार्टीमा कोही आउछु तपाईहरुले काम गरेको खुशि लाग्यो हामीलाई सेवा सुविधा दिनुभयो नगरको विकासको निम्ति तपाईले अहोरात्र रुपमा खटिरहनु भएको छ त्यसले हामी खुशी छौं हामीलाई पार्टीमा प्रवेश गराउनुस् भन्नुहुन्छ भने पार्टीमा आउन हुदैन भनेर मेरो नैतिकताले दिँदैन ।
त्यस कारणले मेरो पार्टीमा आउदा मैले स्वागत गर्नुपर्छ । म एउटा कांग्रेसको लिडर भएर मात्रै पार्टीमा प्रवेश गराएको छु । नकि तपाईहरुलाई शंका लाग्ला मेयर भएर लोभलालच देखाएर पार्टीमा प्रवेश गराएको हो भन्ने कसैलाई शंका लाग्छ भने त्यो भ्रम हो ।
कि जनप्रतिनिधीहरुले कानुन त कुनै पनि पार्टीको कार्यक्रममा नजाने र प्रवेश नगराउने भन्ने आउछ भने म पनि तयार छु । होईन भने सबैलाई लागु हुनुपर्यो । त्यसकारणले नीलकण्ठको मेयरको जिम्मेवारी पुरा गर्दै पार्टीको कार्यकर्ता भएको कारणले गर्दा मैले साथीहरु धेरै आउनु भएको छ त्यसलाई सामाजिक दुरी कायम गर्दै लागेका छौं ।
९.अर्को पटक फेरि नगरको विकासको गर्नको लागि अहिलेको पार्टीमा आईहरहनु भएको छ त्यसको लागि हो ?
होईन, म २०३७ साल देखि नेपाल विद्यार्थी संघ बाट सुरुवात् गरेको । मैले २०४१ सालमा एसएलसी दिए । जेठ १० गते सत्याग्रहमा नुवाकोट जेलमा गएर ६ महिना सम्म बसे । त्यो बेलामा प्रजातन्त्र आउछ भन्ने थियो यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याउनु पर्छ भनेर लागेको हो । म जति दिन जुन पदमा नेतृत्व गर्छु ईमान्दारीता पूर्वक गर्छु ।
मैले हरेक गरेका निर्णयहरुको जवाफ दिन सक्ने भएर मात्रै हस्ताक्षर गरेको हुन्छ । त्यसकारण भोली म मेयर हौला नहौला मलाई पार्टीले टिकट देला नदेला त्यो दोस्रो कुरा हो । सक्छु म राम्रो काम गरेर जान्छु सक्दिन भने कसैलाई कामको जिम्मा दिएर जाने छु । म जनताको सेवक हो र मैले संगठन गर्ने मान्छे हो ।
१०.भिम मगर (निलकण्ठ नगरपालिका–२)
तपाईलाई पार्टी प्रवेश कार्यमा हिड्न सोभा दिदैन । समग्रमा सबै पार्टीको चित्त बुझाउनुपर्छ आगामी चुनावको लागि ?
म अहिले असार साउन केहि भनेको छैन पार्टी प्रवेशमा हिडिरहेको छु । यसको उत्तर मैले अघि नै दिएको छु । तपाईले दिएको सुझाव मनन गर्छु । म जति पनि ठाउँमा पार्टी प्रवेश गराउन गए उहाँहरु खुशि हुनुहुन्छ ।
नगर प्रमुखको हैसियतले राम्रो काम गरेको छ र यो पार्टी भनेको राम्रो हो भनेर प्रवेश गर्नुभएको छ ।विकास निर्माणका योजनाहरुमा पनि मैले नेपाली कांग्रेसको पार्टीलाई बढि दिने र नेकपाको पार्टीलाई कम दिने हो भने मैले उहाँहरु माथि अन्याय गरेको हुन्छ । यदि मैले त्यसरी पक्षपात नै गरेको भए नेकपाको साथीहरु किन नेपाली काँंग्रेसमा प्रवेश गर्न ईच्छुक हुन्थे । उहाँहरु आकर्षित हुनुभएको मैले गरेको काम, मेरो ईमान्दारीता र मेरो कुशलतालाई देखेर नै त होला नि होईन र ।
११.केपि राउत (निलकण्ठ नगरपालिका–१२)
निलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर १२ दामगाडेमा बाटो विग्रीएर नाजुक अवस्था छ उक्त बाटोमा सुधार गरिदिनुभयो भने हामी नीलकण्ठ नगरपालिकावासिहरु एकदमै खुशि हुने छौं ?
त्यो बाटो बनाउनु भन्दा दुई दिन अगाडी १३ नम्बरको वडा अध्यक्ष र हामी सँगै गएका थियौं।त्यसको भोली पल्टनै मैले नीलकण्ठ नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको मिटिङ बसेर दुई वटा कुराहरु तत्काल कार्यन्वयन गर्ने भनेर निर्णय गरेका थियौं।एउटा १३ नम्बर वडाको खुर्वेखोला जाने पुल छ त्यो भत्किएको अवस्था छ त्यहाँ हिम पाईपहरु राखेर बनाउने भनेर निर्णय गरेका थियौं ।अहिले त्यो काम धमाधम भईरहेको होला ।
दोस्रो कुरा उत्तर क्षेत्रका धेरै गाउँपालिकाहरु साङकोष तिप्लिङ सडक बाट जाने भएकोले त्यसलाई ग्रावेल हाल्ने, मेसिनहरु पठाउने त्यहाँको हिलोहरु निकाल्ने भनेर प्राविधिकहरु पठाई सकेको अवस्था थियो एक्कासि नेत्रावती गाउँपालिकाको अध्यक्ष आउनु भयो ।खोलामा मेसिन लाउन थाल्नुभयो तर खोलामा ग्रावेल झिक्नको लागि दिईएको थिएन।उहाँलाई मैले सोध्दा म यो बाटो बनाउछु भन्नु भयो त्यसपछि मैले ग्रावेल झिक्न दिए ।
हामीले निर्णय गरेर पैसा छुट्याईसकेको कामलाई एक दिन आएर झल्याक झुलुक विजुली चम्क्या जस्तो गरि काम गरेर हुदैन।यदि काम नै गर्ने हो भने निरन्तर रुपमा खटेर गर्नुपर्छ ।सारा पत्रकारहरुले पनि गएर फोटो खिचेर नीलकण्ठ नगरपालिकाले सडक त्यस्तो हुदा पनि काम गरेन नेत्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष आएर काम गर्यो भनेर सामाजिक संजालमा पनि धेरै कुरा आयो।
तपाईहरुले यदि उहाँलाई एक दिनको लागि मात्रै काम गर्ने हो कि कामलाई निरन्तरता दिएर गर्ने हो भनेर प्रश्न गर्नुस् अनि थाहा हुने छ।एक दिन आएर विजुली चम्क्या झै आएर काम गराई हुने भए देशमा धेरै विकास हुन्थे होला नि होईन र?
धादिङ भर्याङभुरुङ सडक कहिले पिच हुन्छ?
यो कोभिड १९ को कारणले गर्दा र वर्खाको समयले गर्दा काम अगाडी बढाउन सकिरहेको अवस्था छैन ।अर्को कुरा अहिले झ्याप्पै वर्खाको समय लाग्यो जहाँतही पानी बगिरहेको हुन्छ त्यसले गर्दा सडक पिच गर्ने सम्भव नै हुदैन ।अब हामीले वर्खा समय सकिए लगत्तै उक्त सडकको पिच गर्ने काम धुमाधम सुरु गर्ने छौं।
१३.अमर गुरुङ (निलकण्ठ ४)
रायटारको खानेपानी दिनमा एक घण्टामा मात्रै आउछ खेतको पानी सिधैं ट्याङकीमा संकलन गरि विना फिल्टर वितरण गरिएको छ तसर्थ आप खोला देखि बोकेर पानी बोक्नुपर्ने अवस्था कहिले सम्म हो ?
खानेपानीको विषयमा हामीले साउन लागेपछि समिति बनाउछौं र त्यहाँ आरविटिको मुलको समस्या होईन वितरण पाईप लाईनको समस्या हो अब हामी यो वर्षमा कति सक्छौं त्यसलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडी बढाउने छौँ ।
धादिङबेशी सल्यान्टार सडकको मुआब्जा कहिले मिल्छ र बोर्डिङमा पढाउने शिक्षकलाई तलब दिलाउन स्थानीय सरकारको के छ योजना ?
धादिङबेशी सल्यानटार सडकको मुआब्जा पाईसकेको छ केहि छुटपुटहुनेहरुले कार्यालयमा आएर सम्पर्क गर्नुहोस् मिल्छ । बोर्डिङको विषयमा मातहत नगरपालिका हो तलब त्यो प्राईभेट संस्था भएकोले सम्बन्धीत निकाय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गर्ने कुरा हो न कि स्थानीय सरकारले होईन ।
तल्लोबेशीको बाटो नाम चै ग्रावेल तर माटो मात्रै हालिएको छ नि माटो नै हाल्नुपर्ने हो कि कस्तो हो ?
त्यो त तपाईको हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ । खोलाको ग्रावेल मात्रै हाल्यो भने राम्रो हुदैन । एउटा ग्रावेल सँग २५ प्रतिशत रातो माटो मिसिनुपर्छ । दोस्रो कुरा रोलिङ गर्नुपर्छ त्यो काम सम्पन्न भएको अवस्था छैन सम्भवत हामीले बर्खाको समय सकिए पछि त्यो काम सम्पन्न गर्ने छौं ।
रिटेनिङ वालको लागि पैसा हालिदिन पर्यो मेरो घर साईटमा मिल्छ भने भन्नुपर्यो मिल्दैन भने किन मिल्दैन ?
कहाँ हो, पहिरोको कारणले गर्दा हो कि, सडक खन्दा हो कि तपाईलाई रिटेनिङ वाल आफ्नै घर नजिक चाहिएको हो कि त्यो कुरा स्पष्ट हुने गरि भनिदिए मलाई पनि उत्तर दिन सहज हुन्थ्यो । नगरपालिमा आएर सम्पर्क गर्नुहोला ।
सोझो जनताले मुआब्जा कहाँ पाउछन् म पनि त्यसको प्रतिक्षामा छु ?
धादिङबेशी सल्यानटार सडकको परेको जति दिईसकेको छ धेरैले लगिसकेको छन् केहि छुटपुट मात्रै बाँकि हो तपाईले कार्यालयमा आएर लैजान सक्नुहुने छ ।
१८.आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा हेर्दा कस्तो पाउछौँ होला ?
त्यो बेलामा यो आर्थिक वर्ष सकिएपछि तीन चार वटा कुराहरु हुन्छ । हामीले ठुलो रकम शिक्षाको लागि राखेका छौं । शिक्षाको रुप परिवर्तन हुन सक्छ । विदेशमा वस्ने धेरै युवा युवतीहरु आउनु भएको छ मेयर उद्यमशिलतालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर उद्यमशिल करिब ५ सय जना जति युवा युवतीहरु उद्यमी बनिसकेका हुन्छन् ।
कृषिमा धेरै युवा युवतीहरु लागि सकेका हुन्छन् । यसपालि हामीले पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यलाई राखेका छौँ, यो कोरोनाको कारणले गर्दा । सम्भवत कोरोनाको पोजिटिभ देखिएकाहरुको अत्यन्तै न्युन मात्रामा नीलकण्ठ नगरपालिकामा कोरोनाको न्युनिकरण गरिसकिएको हुन्छौँ । अन्यत्र पालिका भन्दा पनि कोभिड १९ मा नीलकण्ठले राम्रो गर्यो भनेर सुचना दिन सफल भएका हुन्छौँ ।
नगरको बाटो आफ्नो पार्टीलाई विकासको काम आफ्नै आर्यकर्तालाई के सोध्ने मेयरलाई ?
त्यो आफ्नै पार्टीलाई भनेर तपाईले कहाँ कहाँको बाटो भन्नुस् । स्वास्थ चौकी बनाउदा नेपाली कांग्रेसकाले मात्रै पाएका छन् एक नम्बर वडा बनाउदा राजेन्द्र भण्डारीले पाएका छन् कुन पार्टीको हो । यस्ता म सँग धेरै उदाहरण छन् ।
त्यो त प्रक्रियामा जसले पनि पाउन सक्छ । त्यसकारणले नीलकण्ठको हुदा कांग्रेसले मात्रै पाउने यो देशको नेकपाको सरकार छ भन्दैमा नेकपा कार्यकर्ताले मात्रै पाउने होईन कांग्रेसले पनि ठेक्का पट्टा त गर्न पाएका छैनन् । प्रक्रियामा जाने हो जसले न्युन रकममा हालेको हुन्छ उसले पाउछ । लेभलको कुरा हो तपाई जतिको व्यक्तिले यस्तो कुरा गर्दा तपाई आफै विचार गर्नुस् ।
२०.आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि थाती राखेर आईदिनु भयो तपाईलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।
तपाई लगाएत नीलकण्ठ एफएम परिवार सबैलाई धेरै–धेरै धन्यवाद ।
सुनको मूल्य १ लाख नजिक,मूल्य अत्यधिक बढेसँगै कारोबार ठप्प ३० मिनेट पहिले